Kolontsaina sy toekarena – “Pyrogravure”: misongadina any ivelany ny asa tanan’i A.S Andry | NewsMada
Kolontsaina sy toekarena – “Pyrogravure”: misongadina any ivelany ny asa tanan’i A.S Andry
Asa tanana anisan’ny nisongadina nandritra ny hetsika “Voatra” nokarakarain’ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo ny “Pyrogravure” ataon’i A.S Andry. Sady maneho kolontsaina no mahasahana toekarena izany…
Mifamatotra eto ny kolontsaina sy ny toekarena avy amin’ny asa tanan’i A.S Andry na Andrimanantena Solofo Andry, zanak’i Rado (Georges Andriamanantena) mpanoratra. Nasongadina tamin’ny « Voatra » ny zava-kanto vitany hampandrosoana ny fihariana vokarin’ny Malagasy. Ny potika hazo no alaina, tsy hanaovana kitay na saribao fa havadika zava-kanto (“Pyrogravure”, sary na soratra atao amin’ny paikafo) maharitra ampolo taona maro, 20 hatramin’ny 50 taona mahery.
Poti-kazo, fakan-kazo, na hazo efa tsy ampiasaina any ambanivohitra no tena alaina, havadika ho kanto. Misy miantso izy amin’ny hazo efa tapaka, na simban’ny rivodoza. Hazo karazany maro, avy any Moramanga, Anjozorobe …Tsy manapaka hazo i A.S Andry ho fandraisana anjara amin’ny fiarovana ny tontolo iainana. Mahaliana ny olona ny zava-kanto vita avy aminy, ary mivadika ho vola.
Ny atao aminy : asa soratra, tononkalo, na sary toy ny Rovan’Antananarivo sy ny lapa teo aminy, fahizay (1906-1995) ; ny vavahadin’Ambohimiadana, Ampahamarinana sy manodidina. Mirakitra tantara avokoa ireny ka tsara ampitaina amin’ny taranaka ankehitriny. Misintona mpizahatany sy mpikaroka koa ny fisian’ireny. Ny Rovan’Antananarivo, ohatra, raha tsy voaverin’ny fanjakana, ny mpanakanto eto no mamelona ny tantarany.
Mpanjifa any ivelany
Ny ela indrindra, valo volana ny fanatanterahana ny asa iray. Ny mpanjifa ny asa tanana vitan’i A.S Andry dia matetika ireo Malagasy mila ravinahitra any ivelany, misy koa ny eto an-toerana, sy ireo mpizahatany mitondra fahatsiarovana momba an’i Madagasikara. Ny any ivelany, raha misy manafatra dia mandefa i A.S Andry. Tsy voasakana izy io eny Ivato, satria hazo tsotra. Betsaka ireo mpanjifa any ivelany ireo, ahitana azy avokoa ny kaontinanta dimy. Amidy amin’ny vidiny ariary izany na ivelany aza, fa miankina amin’ny asa atao aminy, ny halehibeny sy ny fotoana nanaovana azy.
Miezaka manome lanja ny « Vita Malagasy » fa tsy « vita gasy » i A.S Andry sy ireo mitovy aminy ka mila fanohanana avy amintsika tompony. Efa voapetraka any amin’ny Omapi (Office malagasy de la propriété Industrielle), izay nahazoany fanamarinana. Noho izany, tsy misy afaka misoloky manao ireny karazan-javatra vitany ireny.